Igbo, John: Lesson 016 - Ndịozi isii mbụ (Jọn 1:35-51) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 016 (The first six disciples)
35 N'echi-ya Jọn guzoro, ya na madu abua nime ndi nēso uzọ-Ya; 36 o we le Jisus anya ka Ọ nējeghari, si, Le, Nwa-aturu Chineke! 37 Ndi nēso uzọ-Ya we nu ka Ọ nēkwu, ha we so Jisus. . 38 Jizos we chigharia, hu ha ka ha so n'azu, Ọ si ha, Gini ka unu nāchọ? Ha si Ya, Rabai (nke isi-ya bu, ma asugharia ya, Onye-ozizí), òle ebe I bi? O we si ha, Bianu, le. Ya mere ha biara, hu ebe O biri, ha we nọyere Ya n'ubọchi ahu. Ọ bụ ihe dị ka elekere nke iri.
Kraist bu Okwu Chineke bu madu, chi ahu, ndu n'onwe ya na isi iyi nke ìhè. Nke a bụ otú onye nkwusa ozioma si kọwaa ya. Ọ kọwakwara ozi Jizọs na ọrụ ya. Ọ bụ Onye Okike na onye nchebe nke ihe nile. O nyela anyị ihe ọmụma nke bụ nke ọhụrụ nke Chineke dị ka Nna ọmịiko. Ya mere o kwughachiri, "Le, Nwa aturu Chineke", ichikota ihe omuma nile nke putara nime Jisos dika iwu a si di. N'amaokwu nke iri abụọ na anọ, ọ kọwara Kraịst na isi iyi, ebe ọ bụ na amaokwu nke 29 na nke 33, ọ kọwara nzube Kraịst maka ije ozi.
kraist ghọrọ nwoke e gburu egbu a aja nyere Chineke onye nyere Ọkpara Ya na-agba anyị mmehie na anyị nwere onwe anyị site n'ikpé. Chineke chọrọ a chụọ àjà, o we sure ya dị ka nke ọma dị ka ngọzi na ịnakwere ya. N'okwu nke Pol "Chineke di nime Kraist ime ka uwa na Ya di n'udo, obugh ighota nmehie nile ha megide ha, we nye ayi ozi nke ime ka ayi di n'udo."Ọ dịghịrị ọgbọ anyị mfe ịghọta okwu ahụ bụ "Nwa atụrụ Chineke," ebe ọ bụ nà anyị anaghị egbu ụmụ anụmanụ n'ekpuchi mmehie anyị. Onye okachamara nke agba ochie nke agba ochie na-aghọta ụkpụrụ nke Chineke na-enweghị mgbaghara n'ejighị ọbara. N'ụzọ dị ịtụnanya, Chineke adịghị ata ntaramahụhụ anyị ahụhụ site n'ịwụfu ọbara anyị, ma nyere Ọkpara Ya maka nzube ahụ. Onye Nsọ nwuru n'ihi ndị nnupụisi dị ka anyị. Egburu Ọkpara Chineke maka mmehie ndị ikpe mara, iji mee ka ha bụrụ ụmụ ezi omume nke Nna nke eluigwe. Ka anyị na-asọpụrụ ma na-eto Ya na Ọkpara na Mmụọ Nsọ bụ ndị gbapụtara anyị.
Eso ụzọ abụọ na-aghọta ozugbo omimi nke pụtara na ahịrịokwu, "Nwa atụrụ Chineke".Ma, mgbe ha huru uzo onye Baptist ahu huru Nwa aturu Chineke, ha choro imara Jisos onye gabu Onye nwe ayi, Onye ikpe nke uwa na n'otu oge aja maka ndi mmadu. Echiche dị otú a nwere uche nke abụọ ahụ ka ha gere ntị nke ọma. Jisos ewepughi ndi neso uzo John, kama onye Baptist n'onwe ya duuru ha rue Jisos. Ndị na-eso ụzọ kwetara nkwado ọhụrụ a.Jesus ama enen̄ede ama mmọ onyụn̄ ọdiọn̄ọ mmọ. Ha hụrụ na Jizọs hụrụ n'anya na amara, ma nụ okwu mbụ Jizọs na ozioma a"Gịnị ka ị na-achọ?" Onyenwe wụsa na ha dị ka ozizi, ma nyere ha ohere ikwu okwu na uche ha. Kedu ihe ị na-achọ, nwanne m? Kedu ihe bụ nzube nke ndụ gị? chọrọ Jizọs? ga-eso Nwa Atụrụ ahụ? Mụọ eziokwu kachasị mkpa - kama maka nyocha ụlọ akwụkwọ gị.
Ndị na-eso ụzọ abụọ ahụ rịọrọ Jizọs ka o kwe ka ha soro ya gaa n'ụlọ ya. Ajụjụ nke obi ha dị mma karịa mkparịta ụka n'elu ụzọ ebe ọgba aghara ìgwè mmadụ ahụ ga-adọpụ uche. Jisus we si Ya, Bianu, le. O kwughị, sị, "Bịanụ ma mụ mụọ", ma, "Mepee anya gị, ị ga-ahụ ezigbo Onye m, ọrụ m na ikike m, ma ghọta onyinyo ọhụrụ nke Chineke." Onye ahu nke na-abia nso Kraist nata ohuru ohuru nke uwa, ma hu Chineke dika O si di. Ọhụụ Jizọs kpughere usoro ọgụgụ isi anyị. Ọ ga-abụ echiche nke echiche anyị na olileanya nke olileanya anyị. Ya mere, bia bia hu, dika ndi abua ahu kwuputara, ha kwuputara ya na ndi ozi dika ihe kwesiri ntukwasi obi, "ayi ahuwo otuto Ya, dika oburu nwa muru nke Nna, juputara n'amara na ezi".Ndị na-eso ụzọ abụọ a so Jizọs nọrọ ụbọchị dum. Lee ka oge amara si dị mma! Onye na-ezisa ozi ọma ahụ kwusiri ike na otu n'ime awa nke ụbọchị ahụ gọziri agọzi bụ ihe dị mkpa ná ndụ ya. Nke a bụ awa nke atọ. Mgbe ahụ Jọn onye na-ezisa ozi ọma ghọtara eziokwu nke Jizọs site n'ike mmụọ nsọ, n'ihi na Onyenwe ya nabatara okwukwe ya ma nye ya ezi omume ma kwenye na Jizọs bụ Mezaịa ahụ e kwere ná nkwa. Ìhè nke Kraist ọ nwuru n'ọchịchịrị nke mkpụrụ obi gị? Ị na-eso ya mgbe niile?
EKPERE: Anyị na-eto ma na-eto gị, Nwa atụrụ Chineke. Ị wepụ mmehie nke ụwa, mee ka gị na Chineke dị ná mma. Ajụla anyị, kama ka anyị soro gị. Gbaghara mmejọ anyị; gosiputa ebube-gi, ka ayi we fè gi òfùfè.
Gịnị mere ndị na-eso ụzọ abụọ ahụ ji soro Jizọs?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:36 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)